Niara-nikaon-doha tamin’izany ny Filohan'ny Fikambanan'ireo. Firenena Afrikanina sady filohan’i Afrika Atsimo, Cyril Ramaphosa, ny Filohan'ny Repoblikan’i Tchad, Idriss Déby, Filohan'I Gabon, Ali Bongo Ondimba, Filohan'i Niger, Mahamadou Issoufou, Filohan'i Rwanda, Paul Kagame, Filohan'i Kenya, Uhuru Kenyata, Filohan'ny Repoblika Arabon’i Ejipta, Abdel Fattah al-Sissi, Filohan'ny RD Congo, Félix Tshisekedi, Filohan'I Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ary ny Filoha Malagasy Andry Rajoelina. Manomboka mamaha tsimoramora ny fatorana amin'ny vazaha mpanjanatany amin'izay ve izany i Afrika ? Kaontinanta be mponina tanora indrindra, manan-karena amin’ny resaka natiora sy harena voajanahary I Afrika, saingy toa natao tohatra fiakarana sy fakana akora fototra. Eo amin’ny resaka politika foana no olana satria ezahin’ny mpanjanaka fehezina sy ampiadiana. Nampahafantatra ilay Tambavy CVO moa I Andry Rajoelina tao anatin’ity fifampiresahana ity, nilaza fa nanasitrana ary nahomby kokoa noho ny fampiasana chloroquine io. Naneho fa tena ao anatin’ny ady lehibe izao tontolo izao ary amin’ny fahavalo tsy hita maso, ka tsy basy sy bala no fiadiana, fa ny faharanitan-tsain’ireo siantianfika sy ireo harena voajanahary. Oran’ny firaisankina Afrikanina izao, ary fotoana hanampiana ny tanora sy siantifika, raha ny nambarany hatrany. Asa raha hanomboka hitsoaka ny rivo-baovao ho an’i Afrika na ahoana?